XOG : Xukuumada Saacid oo aheyd midii si adeg u difaacday BADA Soomaaliya. – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
XOG : Xukuumada Saacid oo aheyd midii si adeg u difaacday BADA Soomaaliya.
by admin 20th September 2016 20th September 2016 054
Xukumaddii Ex-Raisalwasaare Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid ) ayaa lagu tilmaama Xukumaddii ugu waxqabad iyo daacadnimadda badnayd ee soo marta dalka Soomaaliya intii ka dambaysay burburkii Dawladii Kacaanka ahayd ee uu hormuudka u ahaa AUN Jaalle Maxamed Siyaad Bare.
Xukumaddi Shirdoon waxay 6 June 2013 kulan ay golaha Wasiiraddu yeesheen ganafka ku dhufteen inay dood iyo muranka ka galaan dhul iyo bad Soomaaliyeed isla markaasna waxaana Golaha wasiiradu shaaciyeen inaysan munaasib ahayn in dhul Soomaaliyeed muran la galiyo.
Xukumaddi Mudane Shirdoon ayaa lagu tilmaamaa Xukumaddi la dagaalantey Musuq-Maasuqa iyo la dagaalanka Argagixisada,waxaana xukukumaddi Saacid ahayd Xukumaddii ugu tayadda badnayd xukumadiihii dalka soo maray iyadoo ay dad badan la dhacsanaayeen waxqabadkii Xukumaddi Shirdoon.
Sidoo kale Xukumaddii Ex-Rasalwasaare Shirdoon ayaa ahayd Xukumaddii kali ahayd ee tagtey inta badan gobolladda dalka Soomaaliya isla markasna si wada jir ah ay shacabka Soomaaliyeed soo wada dhawayeen lana riyaaqeen waxqabadkeeda.
Halkan ka akhriso go’aankii xukuumada Saacid;
Top News: Dowlada Kenya oo wadnaha farta ku heysa iyo isbedel dhanka amaanka oo bilowday
Meydadka Dadkii xalay Mareykanka ku xasuuqay deegaan hoostaga bariire oo Muqdisho la keenay
Muuqaal: Daawo Jaaliyadda Jubaland ee UK oo deeq gaarsiisay xabsiga dhexe ee Kismaayo.